» आज सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनी कुन कुन ? नेपाल पुनर्बीमाको कारोबार घट्यो
०९ श्रावन २०७८
आज सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनी कुन कुन ? नेपाल पुनर्बीमाको कारोबार घट्यो
३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १५:३५
काठमाडौं । गत तीन सातादेखि सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीहरुको सूचिमा उच्च स्थानमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर कारोबार आज भने केही घटेको छ ।
आइतबार अरुणभ्याली हाइड्रोपावरको शेयर सबैभन्दा धेरै ७२ करोड २९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीहरुको सूचिमा पर्दै आएको लुम्बिनी विकास बैंकको शेयर कारोबार आज पनि उच्च छ । सो कम्पनीको ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । चौथो नम्वरमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी परेको छ ।
गत सातामा सवा अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुने पुनर्बीमाको आज ५३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ । त्यस्तै, ज्योति विकास बैंकको ४४ करोड ९३ लाख, अरुण कावेली पावर कम्पनीको ४० करोड ६० लाख, रसुवागढी हाइड्रोपावरको ३६ करोड, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर गरिमा विकास बैंकको ३४ करोड र अपि पावरको ३३ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीको सूचिमा परेका कम्पनीहरुको कारोबार अन्य दिनको तुलनामा निकै न्यून छ । तर, साना कम्पनीहरुको धेरै कारोबार भएकोले ठूला कम्पनीको कारोबार कम भएपनि कूल कारोबार रकमले शिखर चुम्न सफल भएको छ । आइतबार सवैभन्दा कम २१ हजार २२० रुपैयाँको १०.५% एसबिएल डिवेन्चरको कारोबार भएको छ ।
पहिलो पटक जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सिईओ नियुक्त, रामचन्द्र श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्दै
बीमा समितिद्वारा गोप्य अन्तरक्रिया सम्पन्न
बीमा समितिद्वारा ९ वर्ष पुरानो निर्णय फिर्ता, घरजग्गा बाहेकका सम्पत्ति किन्न कम्पनी स्वतन्त्र
७६ लाख २३ हजार कित्ता आईपिओ यसै महिना आउने, तर गोलाप्रथा नगरी नपाइने
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले भोलि पनि कार्यालय संचालन गर्ने
एलआईसी नेपालको बीमा शुल्क इसेवाबाटै भुक्तानी गर्न सकिने, दुई कम्पनीबीच सम्झौता
थप २ हजार ९७७ जनामा कोरोना सक्रमण पृष्टि
तीन कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि बोर्डमा दियो आवेदन
एनएमबि बैंकका ग्राहकले बिगमार्टमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने
कृषि विकास बैंकको बैंकिङ सेवा आजदेखि आइतवारसम्म बन्द हुने
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सका दुई नयाँ शाखा बिस्तार
महुली लघुवित्तमा कर्मचारी आवश्यकता, सहायक प्रबन्धकदेखि प्रशिक्षार्थीसम्म भर्ना गर्ने
चार करोडको बीमा गरेको ३३ दिनमा बीमितको मृत्यु, रिलायबल नेपाल लाइफले १७ महिनापछि गर्यो दावी भुक्तानी